ktmkhabar.com - पैसावालसँग लत्रिने र सर्वसाधारणको अगाडि डुक्रिनेहरूको पहिचान गरौँ, योग्यलाई जिताऔँ !
बिहिबार, बैशाख २२ २०७९
आगामी वैशाख ३० गने स्थानीय सरकारको निर्वाचन हुँदै छ । स्थानीय सरकार भनेको जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने सरकार हो । स्थानीय तहमा आउने प्रतिनिधिहरू योग्य हुन जरुरी छ ।
स्थानीय सरकारलाई जनताको घर आँगनको सरकार भनिन्छ । सर्वसाधारण जनतासँग जोडिएका हरेक समस्याको पहिलो उत्तरदायी सरकार नै स्थानीय सरकार हो । जन्म मृत्यु विवाह तथा नागरिकताको सिफारिस लगायत काम स्थानीय सरकार बाट हुने गर्छन् । त्यति मात्र हैन स्थानीय करको निर्धारणमा समेत स्थानीय सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने गर्छ ।
स्थानीय निकायको अर्को महत्त्वपूर्ण काम विकास निर्माण हो । विकास निर्माणको योजना तर्जुमा गर्ने तथा बजेट विनियोजन गर्ने काम समेत स्थानीय सरकारमा सर्वसाधारणले चुनेका प्रतिनिधिहरूले गर्ने गर्छन् । स्थानीय सरकारमा योग्य प्रतिनिधिलाई चुन्न नसकेको खण्डमा विकास निर्माणका कार्यले गति लिन नसक्ने पक्का हुन्छ ।
योग्य मान्छेहरू स्थानीय सरकारमा नपुग्दा विकास निर्माण लगायत कामहरू सुस्ताउँछन् । त्यसैले स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरूलाई छनौट गर्दा जनताले उम्मेदवारलाई राम्रो सँग पहिचान गरेर मात्रै आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ ।
जनताले मत दिएर पठाएका स्थानीय नेताहरूबाट सर्वसाधारणको आस भनेकै चुनाव अगाडि गरेका बाचा पुरा गरुन् भन्ने हुन्छ तर लहै लहैमा लागेर अयोग्य उम्मेदवारलाई मत दिएको खण्डमा त्यस्ता बाचा पुरा नभई चुनावी एजेन्डामा मात्र सीमित हुन पुग्छन् ।
जनताको सबैभन्दा आस विकास निर्माणमा हुन्छ तर अयोग्य मान्छेले चुनाव जिते विकास निर्माण पनि आफू र आफ्नो पार्टी अनुकूल गर्दै कमिसन र भ्रष्टाचार तिर लालायित हुनाले विकासको मूल फुट्न सक्दैन र अयोग्य मान्छेहरू भ्रष्ट बन्दै प्रस्ट बोल्न छाडिदिन्छन् र जनताले महसुस गर्ने गरी काम गर्न सक्दैनन् ।
स्थानीय चुनावमा तपाईँले मत दिने मान्छे स्थानीय हुन जरुरी छ । स्थानीय जनतामा राम्रो सँग भिजेको मान्छेलाई मात्रै स्थानीय आम समस्याको विषयमा जनाकारी हुने भयो । त्यसैले पहिलो सर्त नै स्थानीय कुनै विवादित विषयमा नमुछिएका सर्वसाधारणलाई धोका नदिने मान्छे छान्नु जनताको पहिलो कर्तव्य हुन आउँछ ।
नेपालमा अहिले बहुदलीय लोकतन्त्रको अभ्यास छ । आजको नेपाली जनता भाषण र आश्वासन हैन, परिणाम खोज्ने गर्छ । मुलत काँग्रेस एमाले माओवादी, समाजवादी,राप्रपा सँग आबद्ध उम्मेदवार र अन्य स्वतन्त्र व्यक्ति हरू नै उम्मेदवार बनेर स्थानीय चुनावमा तपाइको घरदैलोमा भोट माग्न आउने गर्छन् । उम्मेदवार मध्यबाट जनताले योग्य उम्मेदवार छान्न सकेको खण्डमा पाँच वर्षको अवधिमा स्थानीय जनताले विकास र सुशासनको अनुभूति गर्नेछन् तर अयोग्य व्यक्तिहरू स्थानीय सरकारको प्रमुख भएको खण्डमा सोचे अनुसार विकास निर्माण हुन सक्दैन ।
कस्ता व्यक्तिलाई स्थानीय चुनावमा मत दिने ?
चाकडी र पैसामा विश्वास गर्ने हैन योग्यता क्षमतामा र प्रतिस्पर्धालाई विश्वास गर्ने मान्छेलाई मत दिनु पर्छ । जसले चुनाव जितेपछि जनताको घरदैलोमा भएका समस्या समाधान गर्न सक्छ उसैलाई मत दिनु पर्छ । स्थानीय माटो र समस्या सँग भिजेको स्थानीय कला संस्कृति चाड पर्व बुझेको मान्छेलाई भोट दिनु पर्छ । कुनै पार्टीको झोला बोकेकै भरमा पार्टीका अयोग्य उम्मेदवारलाई जिताउने ठेक्का लिनु हुँदैन ।
स्थानीय जनता सँग भिजेको मान्छेलेनै स्थानीय समस्या बुझेर काम गर्न सक्छ । त्यसैले क्षमता भएका मान्छेको पक्षमा मत दिनु पर्छ । अहङ्कार र दम्भ बोकेको पैसावालसँग लत्रिने र आम सर्वसाधारण सँग डुक्रिनेहरु जुनसुकै पार्टीका हुन उनीहरूलाई मत दिन हुँदैन । फिर्के सलामीमा रमाउने जितेपछि म भन्दा ठुलो कोही छैन भने जस्तो गर्ने पुराना मान्छेहरूलाई मत दिएर पुन जिताउनु हुँदैन । सर्वसाधारणले स्थानीय स्तरमा मत दिँदै गर्दा दुई पटक सोचेर कुन चाही उत्तम मान्छे हो भन्ने कुरा हेक्का गरेर आफ्नो गोप्य मतको प्रयोग गरेको खण्डमा राम्रा मान्छेहरू आउन सक्छन् ।
आफूले जिताएका नेताबाट जनताको चाहाना के हुन्छ ?
आफ्नू मतबाट जिताएका नेताले विकास निर्माणमा भूमिका खेल्दिउन भन्ने आम सर्वसाधारणको चाहाना हो । पार्टीको चस्मा लएकाहरूको स्वार्थ अलग होलान् तर बहुसङ्ख्यक जनताको चाहाना विकास निर्माण होस, भ्रस्टाचार नहोस् भन्ने नै हो । जितेका स्थानीय नेताले विकास निर्माणलाई मूर्तरूप दिने र भ्रष्टाचार नगर्ने हो भने पाँच वर्षमा धेरै काम हुन सक्छन् । चुनाव जितेपछि जितेका नेताले परिवार, नाताकुटुम्बलाई मात्रै स्थान नदिउन् र अतिरिक्त आयआर्जनमा आँखानगाडुन् भन्ने चाहाना जनतामा हुने गर्छ । आफन्तवाद बाट मुक्त भएर सर्वसाधारणको हितमा काम गरुन् भन्ने जनभावना रहन्छ ।
गएको चुनावबाट स्थानीय तहका प्रतिनिधिले आफ्ना मान्छे जस्तै भाइ,भतिज, साला जेठानको नामामा निर्माण कम्पनी खोलेर डोजर भाडामा लगाएर स्थानीय तहको बजेट कुम्ल्याएको गुनासा प्रशस्तै आएका थिए । विभिन्न ठाउँमा आफ्नालाई जागिर लाएका गुनासा सुनिन्थे तर आगामी चुनावबाट आउने नेताले आफ्नालाई नभई योग्यलाई क्षमताका आधारबाट काम दिनु पर्छ भन्ने सर्वसाधारण जनताको चाहाना हुन्छ ।
अन्त्यमा लोकतन्त्रमा आधारित हाम्रो मुलुकमा कुनै दललाई या कुनै व्यक्तिलाई मत दिनु भनेको उसलाई विश्वास सुम्पनु र उसैका एजेन्डालाई समर्थन गर्नु हो । त्यसैले योग्य र राम्रो एजेन्डा केकाका मान्छेलाई स्थानीय सरकारमा मत दीन जरुरी छ । कसैको लहैलहैमा नहिँडौँ आफ्नै मानसपटलले योग्य ठानेका मान्छेलाई मत दिएर विजयी गराऊँ ।